တစ်ခေတ်ဆန်း ဗေဒင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » တစ်ခေတ်ဆန်း ဗေဒင်	10
Posted by moonpoem on Dec 16, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 10 comments
ဒီဇင်ဘာ ဖြစ်သော်ငြား ပူအိုက်နေသကဲ့သို့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများလတ်တလောအပူများနေတတ
နိုင်ငံရေးတွင် လှည့်ကွက်များ သောအတိုက်အခိုက်များသော ကာလ
ဖြစ်သကဲ့သို့ တနလာင်္သားသမီးများ လည်းရန်သူများတတ်သည်။
ဆန္ဒပြသူများကို အသံချဲ့စက်များ ဖွင့်၍ နှိမ်နှင်းခြင်းသည် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို နမိတ်
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ ယခုနှစ် မကုန်မချင်း မလိုအပ်ဘဲ အခွန်ဆောင်ရကိန်း မြင်သည်။
လွတ်လပ်စွာ ထားပါ။အားရပါးရ အီးပေါက်ပစ်လိုက်ပါ။
၄ပွင့်ပင် ဖြစ်စေ ၆ပွင့်ပင် ဖြစ်စေ မတွေ့ ဆုံနိုင်သကဲ့သို့ စနေ သားသမီးများ အချစ်ရေးတွင် လမ်းလွဲနေတတ်သည်။လမ်းမလွဲစေရန် မြေနီကုန်းတံတားဆောက်နေသော လုပ်ငန်းခွင်အနီး ပွိုင့်မိစဉ် ချိန်းတွေ့ ပါ။
၇ရက်သားသမီးအားလုံးအတွက် ယတြာမှာ လမ်းထိပ်တွင် ဆိတ်စွပ်ပြုတ် ထွက်သောက်ရင်း ဆိုင်ထဲတွင်ထိုင်နေသူ အားလုံးအား မင်းတို့လက်တွေ လေထဲမှာ မြှောက်ထားလိုက်ဟု အော်ဟစ်၍နှုတ်ဆက်ပေးပါ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: သောကြာသားသမီးများ စိတ်မွန်းကြပ်နေတတ်သည်။
မွန်းကျပ်တတ်သည်..ဆိုတာကြီးက… ဒဲ့ လာမှန်နေလို့…. ဒီနေ့….နဲ့…
တော်တော့် တော်တော်ကို…စိတ်ပွန်းကျပ် ပူလောင်တာတွေ ဖြစ်နေ..ဖြစ်ခဲ့….
pooch says: ဟုတ်​ပါ့ အချစ်​​ရေးလမ်းလွဲ​နေတာတဲ့
ဒီ​ဗေဒင်​ကမှန်​လိုက်​တာ ဒီမှာ​တော့ ၂၆ ဘီလမ်းနဲ့ လမ်း၈၀ ​ထောင့်​က မီးပွိုင့်​မှာ date ရမယ်​ထင်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 374
moonpoem says: ​ဗေဒင်​မှန်​တယ်​ ဆိုပါလား။လုပ်​ငန်း ​ပြောင်း​တော့မယ်​ :P
ခင် ခ says: တနင်းလာနေ့တွင် ” ကျား ” ဟု ကျောက် နံရံအနီးတွင်သုံးကြိမ်အော်ပြီး ကြံ စုတ်ခြင်းပြုကာ လိုရာတောင်းလျှင် အကြံအစည်အောင်လတံ္တ။
ခင်ဇော် says: ဆန္ဒပြသူများကို အသံချဲ့စက်များ ဖွင့်၍ နှိမ်နှင်းခြင်းသည် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်သင့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို နမိတ်
kai says: ယူအက်စ်မှာ အခုခေတ်အစားဆုံး..စကားကြီးတခွန်းက..
အဲဒီလိုနဲ့.. လက်တွေမြှောက်ရက်တန်းလန်း… အပစ်ခံရပြီး.. သေတာပဲ..။ =
Rams Players Enter Field With “Hands Up, Don’t Shoot”
Nov 30, 2014 – St. Louis Rams players recognized this week’s Ferguson protests with an emphatic gesture during player introductions when several members …
uncle gyi says: အားလုံးအား မင်းတို့လက်တွေ လေထဲမှာ မြှောက်ထားလိုက်ဟု အော်ဟစ်၍နှုတ်ဆက်ပေးပါ
manawphyulay says: ဗေဒင်စအဖွင့်မှာ ဖတ်လိုက်ရသော သကာလ ဒီဇင်ဘာမှ ရေနှစ်ခါချိုးခိုင်းထဲက အဆုပ်မကောင်းတဲ့သူအတွက် ဗေဒင်က မှန်နိုင်ဦးပါ့မလားဟင်….
ဆက်လက်ဖတ်မိသောအခါ….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: dj စက် ရောင်းခိုင်းလို့ တော်ပါသေးတယ် ဆြာဂျီးရယ်
နို့ မို့ မလွယ်ပေါက် ပဲ ဟူးးးးးး